Iwu Mbupu - Molooco
Anyị enweghị iwu maka nnyefe ndị omenala, ihe omume sitere n'okike, nyefe site na USPS na onye na-ebu mpaghara na mba gị ma ọ bụ ụgbọelu na ụgbọ njem ụgbọ ala ma ọ bụ igbu oge, ma ọ bụ ụgwọ ego ọ bụla, omenala ma ọ bụ ụgwọ ikpe azụ kpatara.
Rịba ama 1: Anyị anaghị arụ ọrụ ma ọ bụrụ na enweghị ngwugwu ga-eweta n'ihi enweghị ozi, ezughi oke ma ọ bụ ozi ezighi ezi ezigara. Biko tinye nkọwa mbufe zuru oke mgbe ị na-achọpụta. Ọ bụrụ n’ịghọta na ịmehiela na nkọwapụta nke mbupu gị, jiri obiọma zitere anyị ozi na [email protected] ozugbo enwere ike.
2. Ziga anyi ozi na [email protected]molooco.com na-egosi ebumnuche iweghachi ihe ahụ. Biko tinye ihe ndị a na ozi-e:
• Mkpado na akara mmadoro
• Biko hụ na ọ bụrụ na ị na-eweghachi ngwaahịa (s), ha kwesịrị ịnọ n'ọnọdụ zuru oke, ejibeghi, asachapụ yana ngwugwu mbụ ha (ọ bụrụ na ọdabara)
• asịwo bụ maka nloghachi mbupu na-eri
• Original mbupu ebubo agaghị akwụghachi
Laghachi & nkwụghachi
Molooco.com na-ekwe nkwa na ihe ọ bụla zụtara n'aka anyị ga-agbazigharị n'ime 7 ụbọchị azụmaahịa, nkwa azụghachi azụ azụ.
Ọ bụrụ na ị tozuru oke maka nkwụghachi dịka usoro nkwụghachi si kwuo n’elu, ị nwere ike ịrịọ nkwụghachi na “Akaụntụ M> Iwu”Ma ọ bụ ịnwere ike iji njikọ dị n'okpuru:
Họrọ ihe ma ọ bụ usoro niile wee pịa “rịọ nkwụghachi”Bọtịnụ. Mee ka anyị mara na ị ga-achọ nkwụghachi, yana nkọwa doro anya nke ihe kpatara na afọ ejughi gị na nnyefe na bulite onyonyo ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na-akwado. Ọ ga-amasị anyị ịmata ebe ihe mehiere ma ọ bụ otu anyị nwere ike isi melite afọ ojuju ndị ahịa na ahụmịhe ọrụ. A ga-enyocha okwu ọ bụla n'ime 1-2 ụbọchị azụmahịa. N'ihi nke a, onye ahịa ga-anata ozi email, ọ bụrụ na onye ahịa a tozuru maka nkwụghachi, mgbe ahụ nkwụghachi ahụ ga-eme dabere na nkwụghachi ụgwọ iwu ekwuputara n'okpuru.
Nkezi ọkwa 0 / 5. Ọnụ ọnụ ọgụgụ: 0